Nahita mpanjifa be loatra tonga tao aminay izahay taorian'ny nandaniam-bola taonina nihazakazaka nanentana ny karamany isaky ny Click (PPC). Tsy hoe tsy nihaino na nitantana ny kaonty araka ny tokony ho izy izy ireo, fa ny tsy fahafantaran'izy ireo ny fiantraikany amin'ny valiny sy ny fanatsarana azy ireo fotsiny. Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny karama isaky ny tsindry dia ady amin'ny tolotra fotsiny ary tsy tsapany akory fa, amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny doka, dia afaka miakatra ambony noho ny mpandoa avo indrindra izy ireo! Ny fitantanana PPC dia mitaky fifantohana sy traikefa betsaka raha te-hampiasa azy io tokoa ianao, hampihena ny vidiny ary hampiakatra avo kokoa ny taham-panovana anao!
Janoary 5, 2012 amin'ny 1:01 PM
Inona no angona ampiasaina hamaritana ny fahatokisana %?
Janoary 5, 2012 amin'ny 4:54 PM
Tsy azoko antoka DisqueD1…. fanontaniana tsara ho an'ny PulpMedia!
Heveriko fa $.01 no vola kely indrindra azonao ampiana amin'ity formula ity hahazoana ny vidiny marina.
Niresaka tamin'ny orinasa PPC maro aho, fa ny zava-dehibe indrindra azonao atao amin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra dia ny pejy fidirana. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mivarotra zavatra tokana ho anao toy ny web design, na Google Adwords fotsiny, na popups fotsiny, na retargeting fotsiny sns. Tena mahatsikaiky tokoa izany satria na dia misy zavatra 1 aza dia mety hitondra fiovana amin'ny fanentanana ara-barotra azo antoka, tsy misy singa tokana izay dia singa mamokatra na manapaka amin'ny varotra an-tserasera, mila ny fonosana manontolo ianao, ary avy eo manatsara / manatsara avy any. nanao ny pejiko ihany koa aho, retargeting, doka sora-baventy, sns. Raha ny marina, manana ny nomeraon-telefaon'i Simon aho eto, afaka miresaka aminy koa ianao. Antsoy fotsiny izy amin'ny 1-60-302.
lahatsoratra tsara… tena ilaina..